Opera Mini APK ကို - Android အတွက်အကောင်းဆုံးအစာရှောင်ခြင်းက Web Browser ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Opera Mini - Android အတွက်အကောင်းဆုံးအစာရှောင်ခြင်းက Web Browser ကို
Opera Mini - အန်းဒရွိုက် APK ကိုအကောင်းဆုံးအစာရှောင်ခြင်းက Web Browser ကို
Android အတွက်အဆိုပါ Opera Mini web browser ကိုသင်သည်သင်၏ data တွေကိုအစီအစဉ်ကိုဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲသင်အွန်လိုင်းချင်အရာအားလုံးလုပ်ပေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အချက်အလက်များ၏တန်ချိန်ကယ်တင်မယ့်အစာရှောင်ခြင်း, လုံခြုံမိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်, သင်အလွယ်တကူလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအနေဖြင့် download လုပ်ပါပေးနိုင်ပါတယ်။နယူးအင်္ဂါရပ်များ
• ရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတ downloads, အဘို့အလိုအလြောကျစကင်က်ဘ်ဆိုက်များ - အစွန်းရောက် mode ကိုများတွင်လွယ်ကူစွာဝက်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေစရာမလိုဘဲဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ Opera Mini အစွန်းရောက် mode မှာဖြစ်တဲ့အခါ, သူကဆိုက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှငျ့သငျဖိုငျမြားကိုသငျသညျပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်အရာကို site ပေါ်တွင် မူတည်. download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိစေပါလိမ့်မယ်။
• Facebook ကအကြောင်းကြားစာဘား - ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလေးကို Facebook မှသတိပေးချက်ဘားနဲ့စည်းချက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။ အသစ် bar ကိုသင့်ရဲ့အကြောင်းကြားစာကိုအံဆွဲထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမှနောက်ဆုံးသတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်-to-date ဖြစ်အောင်တက်သငျသညျစောငျ့ရှောကျပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့် Opera Mini ကိုရွေးချယ်ပါ?
• သင့်ရဲ့ဒေတာကိုခြေရာခံသိမ်းဆည်းထားပါ - ထို setting များကို Menu ထဲမှာသင့်ရဲ့ငွေစု Check နဲ့ Opera Mini ကိုသင်ကယ်တင်ဘယ်လောက် data တွေကိုကြည့်ပါ။
• block ကြော်ငြာတွေ - သင်နှောင့်အယှက်ကိုကြော်ငြာမပါဘဲဝဘ်ကိုရယူရန်နိုင်အောင်နဲ့ Opera Mini ကိုတစ်ဦး built-in ကြော်ငြာ blocker ရှိပါတယ်။
• video download - ဗွီဒီယိုကို download အထောက်အပံ့တစ်ဦးကဘရောက်ဇာ။ ဗီဒီယိုများကြည့်ဖို့အချိန်မ? ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သစ်ကိုဒေါင်းလုပ် button ကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်အဆင်သင့်ပါပဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကြည့်ပါ။ (စျသျောလညျး, YouTube ဗီဒီယိုမှာအလုပ်လုပ်မဟုတ် - တောင်းပန်ပါတယ်!)
• multi-အလုပ်တခုကို - tabs များနှင့်အတူအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပွင့်လင်းစာမကျြနှာစာရေးထားပါ။
• ပုဂ္ဂလိကပိုင် Browse - ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျနော်တို့လာရောက်လည်ပတ်မှတ်မိဖို့မလိုချင်ကြဘူးစာမကျြနှာရှိသည်။ သင်သည်သင်၏သမိုင်း၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တစ်ခုခုလိုခငျြဘူးဆိုရငျ, သငျသညျပုဂ္ဂလိက tabs များနှင့်အတူရုပ်ဖျက် browse နိုင်ပါတယ်။
• ပိုမိုထိရောက်သော downloads, - နောက်ခံဖိုင်များကို Download နှငျ့သငျကျောကို Wi-Fi ကိုပေါ်မှာဆိုရင်သည်အထိပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲချွတ်ကိုင်ထားပါ။ Opera Mini သင်ကဲ့သို့မကြာမီသင့်ရဲ့ downloads, ပြည့်စုံသကဲ့သို့သိကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ download, ဖွင့်ရန်အကြောင်းကြားစာရုံကို click - မပိုဖိုလ်ဒါထဲမှာလှည့်ပတ်တူး။
အော်ပရာရဲ့မိုဘိုင်းဘရောက်ဇာများအတွက် 8 မရှိမဖြစ်သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks
1 ။ ဒေတာချွေတာ
အဆိုပါဒေတာကိုချွေတာ option ကိုဒေတာငွေစုများအတွက် setting များအတွက် enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤ option ကိုအပေါ်ကိုအသာပုတ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့သူကသင်ကြည့်ရှုနဲ့ Opera ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်မည်မျှသင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏သတ်မှတ်နိုင်သည်ရှိရာဒိုင်ခွက်ဧရိယာရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်သောပုံအရည်အသွေး, ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
2 ။ အော့ဖ်လိုင်းစာမျက်နှာများ
ဒီ feature နှင့်အတူ, သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်ဘို့လင့်များကယ်တင်နိုင်ကြသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာမှအော့ဖ်လိုင်းစာမျက်နှာများနှိပ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအနာဂတ်အဘို့သင့်မီစာမကျြနှာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ themes
အော်ပရာသုံး themes- အမှောင် Mode ကို, အဖြူရောင် Mode နှင့်အနီရောင်ဝဲ mode ကိုအတူပေးပါသည်။ သင်ကသုံးရာမှမည်သူမဆိုကို select နဲ့ Settings ထဲမှာပုံပန်းသဏ္ဍာန်စာမျက်နှာကနေအော်ပရာမှ themes များလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
4 ။ အဆိုပါနောက်ခံအတွက်ပွင့်လင်းတဲပ်များ
ဒါကအော်ပရာအသုံးပြုသူများအတွက်အခြားအကြီးအ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုတော့အသုံးပြုသူများကရိုးရှင်းတဲ့ setting ကိုလုပ်နေသဖြင့်နောက်ခံသစ်ကို tabs များဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့အသုံးပြုသူများကသင့်လက်ရှိစာမျက်နှာကိုအသေးအဖွဲမရှိဘဲပြင်ပလင့်များဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမထားတဲ့များစွာသောအခြား app များသိကြ၏။
5 ။ အကြှနျုပျ၏ Flow
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကသင်သည်ငါ၏စီးဆင်းမှု option ကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏စီးဆင်းမှုသုံးစွဲဖို့အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကနေ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ဖို့အားဖြင့် run ပါလိမ့်မယ်။
6 ။ Image ကိုရှာရန် Shortcut ကို
အော်ပရာမကြာခဏ image ကိုရှာဖွေများအတွက် Google သုံးပြီးသူအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးအမြန်ဖြတ်လမ်း option ကိုရှိပါတယ်။ သငျသညျပုံတစ်ပုံကိုကြိုက်လျှင်သင်ရုံ thumbnail ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
7 ။ ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်
အော်ပရာ built-in ဖြစ်ပါတယ် Google ကအသုံးပြုသူများအတွက်ရသောအခြားအကြီးအ feature ကို, Translate ။ သင်ရုံသင်ကဘာသာပြန်ဆိုဖို့နဲ့ကသင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်။
8 ။ သတင်း Reader ကို
တစ်ဦးက newsreader အော်ပရာလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ပုံပြင်များသင့်ရဲ့ဦးစားပေးနှုန်းအတိုင်း, ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မြင်ရဖြစ်ကြသည်။
•သင့်အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များကို Save: ပုတ်ပု + , သင့် Speed ​​Dial ရန်စာမျက်နှာကိုကယ်တင်သင့်မိုဘိုင်း bookmarks ကိုက add သို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဖတ်ဖို့ search bar ပေါ်တွင်ခလုတ်ကို။
•နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း Get: အဆိုပါစတင်စာမျက်နှာတစ်နေရာတည်းတွင်အရာခပ်သိမ်းစောင့်ရှောက်။ သငျသညျကိုစိတ်ဝင်စားနေနဲ့ Opera Mini ကိုသင်က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖြတ်ပြီးကနေထိပ်ပုံပြင်များနှင့်လတ်ဆတ်သောအကြောင်းအရာများကိုအစေခံမည်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။
•သင့် Device များတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ: သင်၏အခြား devices ထဲကနေ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါငျးတို့သ bookmarks ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးပါ Speed ​​Dial shortcuts တွေကိုပွင့်လင်း tabs များ။
•သင့်ရှာဖွေရေးတက် Switch: သင်၏အကြိုက်ဆုံးက default search engine ကိုသတ်မှတ်။
Opera Mini web browser ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိဝဘ် browse မှအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုစမ်းပါ။
opera.com/help/mini/android/permissions: Opera Mini ကိုအသုံးပြုသည်တိကျသောခွင့်ပြုချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့, နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီး
Opera Mini ရဲ့ Facebook ကနေကြော်ငြာကိုပြသလိမ့်မည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, m.facebook.com/ads/ad_choices တွေ့မြင်
မေးခွန်းများသို့မဟုတ်အကူအညီလိုအပ်? opera.com/help/mini/android/ သွားရောက်ကြည့်ရှု
အော်ပရာ ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း Get:
တွစ်တာ - twitter.com/opera/
Facebook မှာ - facebook.com/opera/
End User အတွက်သတ်မှတ်ချက်များ:
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနှင့် / သို့မဟုတ်ဒီထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် opera.com/privacy မှာ operasoftware.com/eula/mini နှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်မှာအဆုံးအသုံးပြုသူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်သဘောတူသည်။
Opera Mini Apk - အစာရှောင် web browser ကို
6.65 ကို MB
UC Browser ကို Turbo ...
အော်ပရာဘုရင် - ...
အကောင်းဆုံး web browser Android အတွက်အကောင်းဆုံး web browser Opera Mini Opera Mini မှာ Android Opera Mini APK ကို web browser
Davidson Judith says:
အောက်တိုဘာလ 30, 2018 မှာ 11: 45 နံနက်
Opara mini ကိုဌချစ်ခြင်းမေတ္တာက
နိုဝင်ဘာလ 21, 2017 မှာ 11: 44 နံနက်
အော်ပရာကနိုင်ငံတကာ၏ကြယ်ပွင့် browser ကိုဖြစ်ပါတယ်
အောက်တိုဘာလ 2, 2017 မှာ 9: 02 နံနက်
applications.appsapk ၏ NIC ရာအရပျ
ဧပြီလ 26, 2017 မှာ 8: 11 ညနေ
Dhiraj Kumar က says:
ဇန်နဝါရီလ 16, 2019 မှာ 2: 55 ညနေ
Sidath Tenna says:
ဧပြီလ 18, 2017 မှာ 7: 21 ညနေ
မည်သို့ဈအော်ပရာ mini ကိုလျှောက်လွှာလုံခြုံ App ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော password များကဲ့သို့အထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များခိုးယူအဖြစ်မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိမှုအရာတို့ကိုမဆံ့မသိရသလဲ
mahammednur girma says:
ဧပြီလ 13, 2017 မှာ 12: 38 နံနက်
အော်ပရာ mini ကို apps များနှင့်ကျွန်မအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အသုံးပြု. MA အစီအစဉ်တွင်ပညာရေးကိုသင်ယူချင်ကြတယ်။
မတ်လ 22, 2017 မှာ 3: 22 ညနေ
မတ်လ 21, 2017 မှာ 3: 23 ညနေ
ငါသိပ်အော်ပရာကိုချစ်။ သို့သော်နေဆဲငါနှင့်သာ version ကိုအစိုးရဝင်ရောက်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ဖြစ်တယ်ကတည်းကအီသီယိုးပီးသည်တဦးတည်းအလွန်ဟောင်းနွမ်းအော်ပရာဗားရှင်း (မီးခိုးရောင်စက်ဝိုင်းလိုဂိုနှင့်အတူတဦးတည်း) ကိုသုံး Facebook က, YouTube ကို LinkedIn တို့ ... အပါအဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ထား။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2016 မှာ 6: 36 ညနေ
ကိုယ့်ချစ်ကြောင်းကိုကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ခုသာအရာကသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့အော်ပရာ mini ကို
အောက်တိုဘာလ 27, 2016 မှာ 12: 01 နံနက်
ကိုယ့်ကြောင့် luv ... ..
အောက်တိုဘာလ 10, 2016 မှာ 12: 23 နံနက်
သြဂုတ်လ 19, 2016 မှာ 3: 54 ညနေ
Farhad Guli says:
မတ်လ 31, 2016 မှာ 8: 23 ညနေ
ယခုအကောင်းဆုံး browser ကို, Android OS မှ Nokia OS ကိုကနေကျေးဇူးတင်စကားအော်ပရာ mini ကို "(သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ငါ၏အ childhoot
ဒေါက်တာ Ngozi says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2015 မှာ 3: 06 ညနေ
ကောင်းသော app ကို။ ငါပုဂ္ဂလိက browsing အတွက်သဘောကျတယ်။
အောက်တိုဘာလ 27, 2015 မှာ 8: 04 နံနက်
ငါသည်ဤ apk2ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ဒါဟာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့ Pre-တပ်ဆင်ထားသည်အင်တာနက်ထက်အများကြီးပိုနှေးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါက Samsung J5 သုံးပြီးနေပါတယ်။
ငါအရှုံးမပေးနဲ့နောက်ကျောကိုအင်တာနက် apk မှလာ ...
ဇန်နဝါရီလ 5, 2015 မှာ 9: 41 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2014 မှာ 10: 35 နံနက်
ကို goto '' အော်ပရာ: config ကို '' ကိုပိုမို settings ကိုကြည့်ဖို့ url လိပ်စာကိုပါ။
သို့မဟုတ်: တစ် download, သို့မဟုတ် website ကိုဖမ်းလျှင် '' server ကို reset '' ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2014 မှာ 8: 49 ညနေ
က yaar..like ထိပ်တန်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2014 မှာ 8: 37 ညနေ
သငျသညျအများကြီး veeeeeeeeeeeeeeeery ထင်
နိုဝင်ဘာလ 12, 2014 မှာ 11: 54 ညနေ
ငါယခုတိုင်အောင်အများအပြား browser ကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးပေမယ့် speedo အော်ပရာအစဉ်မပြတ်ငါက android ရဲ့အစငါကငါ့အကြောင့်ချွေတာအချက်အလက်များ၏နည်းပညာရဲ့ကိုချစ်မတိုင်မီ Windows PC ပေါ်မှာထက်ပို browsing များအတွက်အချက်အလက်များ၏အများကြီးကယ်တင်ငါ့အပေါ်အော်ပရာကိုအသုံးပြုဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိသမျှသည်အခြားသောထက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှု plz ဟောင်းတဦးအဆာ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်၎င်း၏အပေါ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်
raghunath mudiraj says:
နိုဝင်ဘာလ 5, 2014 မှာ 2: 41 ညနေ
browsing နဲ့ downloads, အကောင်းဆုံး browser ကို
အောက်တိုဘာလ 27, 2014 မှာ 8: 06 ညနေ
ငါ၏အထံတော်၌ ... java ၎င်း၏အကောင်းဆုံးအလုံအလောက် mobiled ... ကိုယ့်ဟာ android user တွေအတွက် UC browser ကိုအကြံပြု bt ...
အောက်တိုဘာလ 19, 2014 မှာ 4: 59 ညနေ
ဒီ browser မှာအဘယ်သူမျှမတညဉျ့ mode ကိုဒါ ur မျက်စိဂရုစိုက် ...
အောက်တိုဘာလ 11, 2014 မှာ 12: 31 ညနေ
ကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယ်သူမျှမ 1 browser ကို
အောက်တိုဘာလ 8, 2014 မှာ 4: 41 ညနေ
ဒါဟာငါ့အဘို့ကောင်းသော browser တခုဖြစ်တယ်။
မေလ 6, 2017 မှာ 4: 14 နံနက်
nabin Sankar Podder says:
အောက်တိုဘာလ 3, 2014 မှာ 4: 17 နံနက်
ငါသည်ဤ site ကိုကြိုက်တယ်။